नेपाली पब्लिक शुक्रबार, चैत १४, २०७६ १९:२१
काठमाडौं – सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण भएको व्यक्तिसंग सम्पर्कमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिमा (कोभिड-१९) को लक्षण नदेखिएको बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले अहिलेसम्म संक्रमित को संसर्गमा रहेका कसैमा पनि कोरोना नदेखिएको बताए।
देवकोटाको अनुसार अहिलेसम्म ८ सय २ जनाको टेष्ट भएको थियो जसमा ३ जनामा (कोभिड-१९) पोजेटिभ देखिएपनि १ जनालाई निको भएको र २ जनालाई टेकु अस्पतालको आइसुलेशनमा राखेको बताए। त्यसै गरि अन्य ४ जना टेकु अस्पताल, ६ जना पाटन र कान्ति बाल अस्पतालमा ३ जना नयाँँ बिरामी परिक्षणको लागि आएको जानकारी दिए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको अनुसार कोरोना बाट जोगिन घरैमा कम्तिमा पनि १ मिटर दुरीको सुत्र पालना गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै डा. कार्कीले बजारमा कुनै पनि सामान खरिद तथा बिक्रि गर्दा पनि १ मिटर को दुरी कायम राख्न अपिल गरे। अहिले कोरोना भाइरस सबै भन्दा पहिले स्वासको माध्याम बाट सर्ने भएकोले यस्तो दुरी अपनाउन अपरिहार्य रहेको बताए।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १४, २०७६ १९:२१
मंगलबार, जेठ २०, २०७७ १६:१५ नारायणी अस्पतालमा ओपिडी सेवा शुरु
सोमबार, जेठ १९, २०७७ १६:४८ स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ – कोरोनासँगै डेङ्गुको जोखिम पनि बढ्यो
आईतबार, जेठ १८, २०७७ १२:२० क्वारेन्टिनमा योग प्रशिक्षण
कोरोना सर्ने भन्दै स्वास्थ्यकर्मीमाथि निर्घात कुटपिट, तीन जना पक्राउ
संक्रमण देखिएपछि जुम्लामा निषेधाज्ञा जारी
‘सबै समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक मार्गबाट’